Amyloidosis (အမိုင်လွိုင်ဒိုဆစ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Amyloidosis (အမိုင်လွိုင်ဒိုဆစ်)
Amyloidosis (အမိုင်လွိုင်ဒိုဆစ်) ကဘာလဲ။
ရေးသားသူ Dr. Zin Wai Yan Lin ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Kaung Thar
၎င်းသည်သင်၏ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများစွာကို ထိခိုက်စေနိုင် သော အဖြစ်နည်းသော ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်တွင်း အင်္ဂါ ပျက်စီးပြီး သေစေနိုင်လောက်ပါသည်။
Amyloidosis အမျိုးအစားများစွာ ရှိပါသည်။
Immunoglobulin light chain (AL) amyloidosis သည် အဖြစ်အများဆုံး amyloidosis အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။ primary amyloidosis ဟုလည်း ခေါ်သည်။ ရိုးတွင်းခြင်ဆီမှ ပုံမှန်မဟုတ်သော ပဋိပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်သောကြောင့် ဖြစ်ပွားပါ သည်။ ဤအခြေအနေသည် သင်၏ အသည်း၊ ကျောက်ကပ်၊ နှလုံး၊ အရေပြားနှင့် အာရုံကြောများကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။
AA amyloidosis ကို secondary amyloidosis ဟုလည်း ခေါ်ပါသည်။ ၎င်းသည် အများအားဖြင့် ကျောက်ကပ်ကို ထိခိုက်စေပြီး အခြား နာတာရှည် ရောဂါပိုး ကူးစက်ခြင်းများ သို့မဟုတ် ရောင်ရမ်းသော ရောဂါ များနှင့် အတူ ဖြစ်ပွားသည်။
Hereditary (familial) amyloidosis သည် မျိုးရိုး လိုက်သည်။ အသည်း၊ အာရုံကြော၊နှလုံးနှင့် ကျောက်ကပ် တို့ကို ထိခိုက်စေသည်။ ၎င်းသည် လူဖြူများထက် အာဖရိကန် အမေရိကန်များတွင် ပိုဖြစ်သည်။
Dialysis-related amyloidosis သည် amyloid များ အဆစ်နှင့် ကြွက်သားကြောများတွင် စုပုံလာသော အခါ ဖြစ်ပွားသည်။ တောင့်တင်းခြင်း၊ အဆစ်များတွင် အရည်များ စုပုံခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။ ဤ အမျိုးအစား သည် ကာလကြာရှည် ကျောက်ကပ်ဆေးခြင်း ပြုလုပ် သူများတွင် ဖြစ်ပွားသည်။
အန္တရာယ် ဖြစ်စေသော အချက်များကို လျော့ချခြင်းဖြင့် ဤရောဂါကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။ ပိုမိုသော အချက် အလက်များအတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင် ပါ။
Amyloidosis (အမိုင်လွိုင်ဒိုဆစ်) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
များသောအားဖြင့် amyloidosis သည် အနှောင်းပိုင်း အဆင့်များ ရောက်မှသာ ရောဂါလက္ခဏာ ပေါ်သည်။ amyloid များ စုံပုံသော အင်္ဂါအပေါ်မူတည်ပြီး ရောဂါလက္ခဏာများ ကွဲပြားသည်။ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော ရောဂါ လက္ခဏာများမှာ
အထက်တွင် ဖော်ပြ မထားသော အခြားလက္ခဏာ များလည်းရှိနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သင့်ဆီတွင် ရောဂါ လက္ခဏာ တစ်ခုခု ရှိနေသည်ဟု စိုးရိမ်ပါက ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေး တိုင်ပင်သင့်သည်။
သင့်ဆီတွင် အထက်ဖော်ပြပါ ရောဂါလက္ခဏာများထဲမှ တစ်ခုခုများရှိနေပါက သို့မဟုတ် မေးခွန်းတစ်ခုခုရှိနေပါက ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ လူတိုင်း၏ ခန္ဓာကိုယ်တုံ့ပြန်မှု သည် မတူညီနိုင်ပါ။ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင် ဆွေးနွေးခြင်း သည် သင်၏အခြေအနေ ကောင်းမွန်ရန် အတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါသည်။
Amyloidosis (အမိုင်လွိုင်ဒိုဆစ်) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
Amyloid သည် ရိုးတွင်းခြင်ဆီမှ ထုတ်လုပ်သော ပုံမှန်မ ဟုတ်သော ပရိုတိန်းတစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ အခြား ကိုယ်အင်္ဂါများ တွင် အနည်ကျစုပုံနိုင်ပြီး amyloidosis ဟုခေါ်သော ရောဂါ ဖြစ်စေသည်။ ရောဂါဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းသည် သင် ဖြစ်သော amyloidosis အမျိုးအစားပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
Amyloidosis (အမိုင်လွိုင်ဒိုဆစ်) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ဤရောဂါဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသော အချက်များစွာ ရှိပါ သည်။ ဥပမာ-
မိသားစုတွင် ဖြစ်ဖူးသော မှတ်တမ်းရှိခြင်း
အသက်။ AL amyloidosis သည် အသက် ၅၀ နှင့် အထက် လူများတွင် ဖြစ်လေ့ရှိသည်။
လိင်။ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် AL amyloidosis ပိုဖြစ်လွယ်သည်။
အခြားရောဂါများ။ နာတာရှည် ရောဂါပိုးကူးစက်ခြင်း သို့မဟုတ် ရောင်ရမ်းသော ရောဂါသည် AA amyloidosis ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။
Amyloidosis (အမိုင်လွိုင်ဒိုဆစ်) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
အထက်တွင် ဖော်ပြထားသော ရောဂါလက္ခဏာများ ရှိနေ ပါက ရောဂါစစ်ဆေးမှု အပြည့် ပြုလုပ်ရန် ဆရာဝန်နှင့် သွားရောက်ပြသသင့်သည်။ Amyloidosis ကို ဓာတ်ခွဲခန်း စစ်ဆေးမှုများ ( သွေးနှင့်ဆီး)၊ တစ်ရှူးစ ထုတ်ယူ စစ်ဆေးခြင်း နှင့် ပုံရိပ်ဖော် စစ်ဆေးခြင်းများဖြင့် သတ်မှတ် အဖြေရှာနိုင် သည်။
Amyloidosis (အမိုင်လွိုင်ဒိုဆစ်) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
Amyloidosis ကို ပျောက်ကင်းအောင် ကုသနိုင်ခြင်း မရှိပါ။ သို့သော် ကုသမှုသည် ရောဂါလက္ခဏာများနှင့် နောက်ထပ် ပျက်စီးမှုများကို ကာကွယ် ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ဓာတု ကုထုံးကို amyloidosis ဖြစ်ပေါ်မှုကို ရပ်တန့်ရန် သုံးနိုင်သည်။ အဓိက မဟုတ်သော သွေးပင်စည်ဆဲလ် အစားထိုးခြင်းကို လည်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထိုကုသမှုတွင် သင်၏ ပင်စည်ဆဲလ် များကို သွေးမှထုတ်ယူပြီး သင့်ခန္ဓာကိုယ် ဓာတုကုထုံး ခံယူနေ စဉ် သိမ်းဆည်းထားသည်။
ထို့နောက် ထိုပင်စည်ဆဲလ်များကို သွေးကြောမှတစ်ဆင့် သင့်ခန္ဓာကိုယ်တွင်းသို့ ပြန်သွင်းပေးသည်။ နာကျင်ခြင်း သက်သာရန်၊ သွေး အခြေအနေနှင့် နှလုံးခုန်နှုန်း ထိန်းချုပ် နိုင်ရန် အရည် စွဲထိန်းခြင်းကို ကုသရန် အခြားဆေးများ ပေးနိုင်ပါသည်။
လူနေမှုပုံစံ ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများ အသုံးပြုခြင်း သည် Amyloidosis ကို ကုသရာတွင် ဘယ်လို အထောက် အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ပါ လူနေမှုပုံစံများ နှင့် အိမ်သုံး ကုထုံးများ သည် Amyloidosis ကို ထိန်းချုပ်နိုင် ပါသည်။
အပြင်းအထန် အားထုတ်ရသော လှုပ်ရှားမှုများကို ရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။
ကျန်းမာရေးအတွက် စွမ်းအင်ပေးနိုင်သော မျှတသော အစားအသောက်ကို ထိန်းသိမ်းစားသောက်ပါ။
အကယ်၍ သင့်တွင် မေးခွန်းများ ရှိပါက သင့်အတွက် သင့်တော်သော အဖြေရှာဖွေနိုင်ရန် ဆရာဝန် နှင့် ဆွေးနွေး တိုင်ပင် သင့်ပါသည်။
Amyloidosis. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/amyloidosis/basics/definition/con-20024354 Assessed September 3, 2016
Amyloidosis. http://www.webmd.com/cancer/lymphoma/amyloidosis-symptoms-causes-treatments?page=1#1 Assessed September 3, 2016
Amyloidosis. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/amyloidosis/basics/causes/con-20024354 Assessed September 12, 2016
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ အောကျတိုဘာ 28, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဇနျနဝါရီ 17, 2018